Casio G-Shock GSW-H1000-1 - Daawashada Smart | TeraNews.net
qoraaga Nikitin Eugenius La daabacay 02.04.2021
Dhamaanteen waan ka ognahay nooca Casio ilaa yaraantiisii. Marka ay timaado daawashada fasalka isboortiga, sumaddan ayaa ah tan ugu horreysa ee maskaxda ku soo dhacda. Oo waxay ahayd wax aad u qariib ah in laga arko sida laga soo xigtay sumaddan cajiibka ah, sannad illaa sannadka, macaamiisha ayaa u tagaya kuwa soo saarayaasha kale. Laakiin, sida muuqata, waqtigii ayaa la gaadhay. Jabbaanku wuxuu soo saaray Casio G-Shock GSW-H1000-1.
Waxa aan ka ognahay Casio, maxaa ka dhigaya mid gaar ah
Dhamaadkii qarnigii 20aad, adduunku wuxuu bartay ilaalin elektaroonik ah oo cajiib ah oo loogu talagalay dadka jecel qaab nololeedka firfircoon - taxanaha Casio G-Shock. Hal xayeysiis ayaa ku filan in la fahmo in isticmaalehu leeyahay saacad weligeed ah. Xoog leh, la isku halleyn karo - kuma quustaan ​​biyaha, kama baqayaan garaacis. Qaar ka mid ah taageerayaasha ayaa wali xiran saacaddan ka dib dhowr iyo toban sano.
Si si uun loogu kala duwo safka daawashada qaab ahaan, Jabaanku waxay bilaabeen saacadihii Edifice, Sheen, Youth, G-Steel taxane ah oo iib ah. Dhammaantood waxaa loogu talagalay xaalado aad u daran waxayna ku kala duwan yihiin muuqaal ahaan iyo qiimahoodaba. Wax walbana way ku fiicnaan lahaayeen soo saaraha haddii adduunka uusan arkin jijimado Smart ah iyo saacado casri ah. Halkaana, Casio ayaa waqtigooda ku seegay isagoo iska indhatiraya fikradda ah inuu u beddelo aalado casri ah.
Casio G-Shock GSW-H1000-1 - qiimaha iyo astaamaha
Waxaa fiican inaad kubilaabato qiimaha - Yurub gudaheeda, qiimaha ugubka ah ee dukaamada sumadda Japan waxay noqon doontaa $ 700. Waxay umuuqataa mid waalan marka la barbar dhigo noocyada kale. Laakiin. Markuu bartay astaamaha farsamada, iibsaduhu wuu fahmi doonaa inay tani tahay diyaarad dhab ah, taas oo, marka laga hadlayo shaqaynta, xitaa suunka ku xidho xitaa Apple Watch-ka caanka ah.
ilaalinta laga bilaabo naxdinta, gariirka, boodhka iyo qoyaanka (20 Bar), Casio G-Shock GSW-H1000-1 xitaa lagama hadlin. Intaas waxaa sii dheer, saacaddu waxay u adkeysan doontaa kuleylka, qabowga iyo isbeddelka heerkulka degdegga ah. Waa Casio! Xitaa suunka polymer wuxuu heli doonaa adkeysi heer sare ah iyo dabacsanaan.
Qeybta softiweer iyo isdhaafsiga wireless
nidaamka hawlgalka waayo Casio waxaa soo saaray Google (Wear OS). Uma wici karo luqad qabow, laakiin xeeladdu waxay tahay inay taqaano sida loola shaqeeyo dukaanka Google Play. Haddii saacaddu ay is muujiso dhinaca wanaagsan oo soo jiidato iibsadayaal badan, markaa wax dhibaato ah kama jiri doonaan barnaamijka.
Wi-Fi moduleku si dhib yar ayaa loogu yeeri karaa mid khuseeya. Heerka IEEE 802.11 b / g / n waa la isticmaalay. Waa inaadan filan xawaare sare. Laakiin halkan, sidoo kale, Jabaanku way ka faa'iideysteen. Chip waa tamar ku habboon. Taas oo aad muhiim ugu ah smartwatches.
Isla nasiibku wuxuu saameeyay moduleka Bluetooth... Nooca jajabka ah ee lagu rakibo 4.0 iyadoo la adeegsanayo batari yar. Guud ahaan, joogitaanka labada nooc ee isku xidhka wireless-ka waa mid aan la sharixi karin. Waxay qabtaan isla hawsha guud ahaanna wax uma taraan hawlo dhowr ah. Maaddaama Casio G-Shock GSW-H1000-1 smart watch uu yahay farsamo madax-bannaan oo shaqeyn karta iyada oo aan casriga ahayn.
Shaashadda LCD ee Casio iyo qeexitaankeeda
Way cadahay in saacadu leedahay xakamaynta taabashada. Hayso bandhig xallin hoose - 360x360 dhibco halkii inji oo laba jibbaaran. Waxyaabaha khaaska u ah shaashadda ayaa ah inay beddeli karto midabbada iyo qaababka muujinta macluumaadka monochrome. Tani waa muuqaal waxtar leh haddii aad u baahan tahay adeegsi muddo-dheer ah oo saacado caqli-gal ah oo laga qaado hal batari oo keliya.
Waxqabadka Casio G-Shock GSW-H1000-1
Waana halkaan halka ficil ee ugu xiisaha badani ka bilaabmayo. Taageerayaasha astaanta ayaa lagayaabaa inay xasuusan doonaan sababta saacadaha Casio G-Shock oo dhan u qabow ahayeen. Iyo sababta kalluumeysatada, ugaadhsadayaasha, fuulitaanka iyo dalxiisayaashu ay si fudud ugu hammiyaan inay iibsadaan mucjisadan tikniyoolajiyadda Japan. Hada qiyaasi dhamaan astaamaha aad rabto, kuna dar tikniyoolajiyad casri ah. Waxay u soo bixi doontaa wax sidan oo kale ah:
Kumbuyuutar dijitaal ah oo leh gyroscope (wuxuu muujinayaa koorsada qaab saddex-cabbir ah).
Altimeter (oo leh xusuus ilaa 40 rikoor).
Wejiyada ebb iyo socodka.
Qorrax soo baxa iyo qorrax dhaca.
Qiyaasta garaaca wadnaha ee indhaha (oo leh jaangooyooyin dejin iyo ogeysiin dhawaaq ah).
Saacada-saacadda (ilaa 100 saacadood).
Kaaliyaha codka (Google).
Barnaamijyo tababar ah.
Cilladaha kaliya ee jira ayaa ah qaabeynta. Dhammaan moodooyinka saacadaha waxaa lagu sameeyaa nooc ka mid ah qaabka austere. Xitaa Casio G-Shock GSW-H1000-1 oo leh suun casaan ah ayaa umuuqda mid arxan daran. Waxaa laga yaabaa in tani ay tahay moodada, laakiin waxaan jeclaan lahaa qaab dhallinyaro badan, sidii ay ahayd dhammaadkii qarnigii 20aad.
Waxaa laga yaabaa in soo-saaruhu uu ka baqay inuu kala duwo khadka saacadaha, isagoo aan ogeyn sida iibku u socon doono. Waqtiga ayaa sheegi doona. Aynu isku dayno inaan ku amro saacad tijaabo ah si aan u fahamno haddii ay tahay isla Casio qabow ama mid caqli-gal ah.
Velomobile Twike 5 - xawaare dhan 200 km saacaddii